China Resveratrol ifektri nabakhiqizi | Y&R
I-resveratrol iyinhlanganisela ye-polyphenolic etholakala kakhulu ezitshalweni. Ngo-1940, iJapane yaqala ukuthola i-resveratrol ezimpandeni ze-albhamu yesitshalo se-veratrum. Ngawo-1970, i-resveratrol yaqala ukutholwa esikhumbeni samagilebhisi. I-Resveratrol ikhona ezitshalweni kumafomu we-trans kanye ne-cis mahhala; zombili izinhlobo zine-antioxidant biological activity. I-trans isomer inomsebenzi webhayoloji ophakeme kune-cis. I-resveratrol ayitholakali kuphela esikhumbeni samagilebhisi, kodwa nakwezinye izitshalo ezifana ne-polygonum cuspidatum, amantongomane, kanye ne-mulberry. I-Resveratrol iyi-antioxidant yemvelo kanye ne-ejenti emhlophe yokunakekelwa kwesikhumba.
Igama lomkhiqizo: I-Resveratrol
Ikhodi Yomkhiqizo: I-YNR-RESV
INCI igama: I-Resveratrol
Omqondofana: I-TRANS-3,4,5-TRIHYDROXYSTILBENE;TRANS-3,5,4'-STILBENETRIOL;TRANS-RESVERATROL;TRANS-1,2-(3,4',5-TRIHYDROXYDIPHENYL)ETHYLENE;RESVERATROL;RESVERATROLE;3,4; ',5'-TRIHYDROXY-TRANS-STILBENE;3,4',5-TRIHYDROXY-TRANS-STILBENE
INOMBOLO YECAS. 501-36-0
I-Molecular Formula: I-C14H12O3
I-Resveratroliyinhlanganisela ye-polyphenolic etholakala kakhulu ezitshalweni. Ngo-1940, iJapane yaqala ukuthola i-resveratrol ezimpandeni ze-albhamu yesitshalo se-veratrum. Ngawo-1970, i-resveratrol yaqala ukutholwa esikhumbeni samagilebhisi. I-Resveratrol ikhona ezitshalweni kumafomu we-trans kanye ne-cis mahhala; zombili izinhlobo zine-antioxidant biological activity. I-trans isomer inomsebenzi webhayoloji ophakeme kune-cis. I-resveratrol ayitholakali kuphela esikhumbeni samagilebhisi, kodwa nakwezinye izitshalo ezifana ne-polygonum cuspidatum, amantongomane, kanye ne-mulberry. I-Resveratrol iyi-antioxidant yemvelo kanye ne-ejenti emhlophe yokunakekelwa kwesikhumba.
I-Resveratrol iwumthombo oyinhloko wezimboni zemithi, amakhemikhali, ukunakekelwa kwezempilo kanye nezimonyo. Kuzinhlelo zokusebenza zezimonyo, i-resveratrol ibonakala ngokubamba ama-radicals mahhala, i-anti-oxidation, nemisebe elwa ne-ultraviolet. Kuyi-antioxidant yemvelo. I-Resveratrol nayo ingakhuthaza ngempumelelo i-vasodilation. Ngaphezu kwalokho, i-Resveratrol ine-anti-inflammatory, anti-bactericidal kanye nomphumela womswakama. Ingaqeda induna yesikhumba, i-herpes, imibimbi, njll. Ngakho-ke, i-Resveratrol ingasetshenziswa kukhilimu wasebusuku kanye nezimonyo ezimanzisa.
Ukubukeka Okumhlophe-okumhlophe kuya kumpushana omhlophe omhlophe
Isivivinyo 98.0% iminithi.
Usayizi wezinhlayiya I-NLT 100% nge-80 mesh
Ukuminyana ngobuningi 35.0~45.0 g/cm3
Ukulahlekelwa Ekumisweni 0.5%ubuningi.
Izinsalela ekushiseni 0.5%ubuningi.
Izinsimbi Ezisindayo Eziphelele 10.0 ppm ubuningi.
Ukuhola (njenge-Pb) 2.0 ppm ubuningi.
I-Arsenic(As) 1.0 ppm ubuningi.
I-Mercury(Hg) 0.1 ppm ubuningi.
I-Cadmium(Cd) 1.0 ppm ubuningi.
Izincibilikisi Ezisele 1500 ppm ubukhulu.
Inani Lepuleti Eliphelele 1000 cfu/g ubuningi.
Imvubelo nesikhunta 100 cfu/g ubuningi.
Umsebenzi & Isicelo:
2. Umphumela ohlelweni lwenhliziyo nemithambo yegazi;
3. I-anti-bacterial kanye ne-anti-fungal;
4. Yondla futhi ivikele isibindi;
5. I-Anti-oxidant futhi icisha ama-free-radicals;
6. Umthelela kumetabolism yenkinga ye-osseous.
7. Isetshenziswa emkhakheni wokudla, isetshenziswa njengesengezo sokudla esinomsebenzi wokwelula impilo.
8. Isetshenziswa emkhakheni wezemithi, ivamise ukusetshenziswa njengesithako somuthi noma izithako ze-OTCS futhi iphethe ukusebenza kahle kokwelapha umdlavuza nesifo senhliziyo ne-cerebrovascular.
9. Isetshenziswa ezimonyoni, ingabambezela ukuguga futhi ivimbele imisebe ye-UV.
I-resveratrol ivikela amangqamuzana ekucindezelekeni okwenziwe nge-oxidative; iyi-antioxidant eyenza kusebenze ukuhlanganiswa kwamanye ama-compounds. I-Resveratrol iphinde ilawule ukuphendula kokuvuvukala futhi isize nokusabalalisa isikrini selanga sezimonyo, ukuze sisize ukuvikela ukulimala kwe-UV esikhumbeni. Ucwaningo olwenziwa ngo-2008 lwabonisa ukuthi ukusetshenziswa kwe-topical kwe-resveratrol esikhumbeni kungavimbela umonakalo owenziwe yi-UV. Ukufana kwesakhiwo kuvumela i-resveratrol ukuthi ithathe indawo ye-estrogen kwabesifazane be-postmenopausal. Ngakho i-resveratrol inganciphisa ukulahleka kwe-collagen futhi ibambezele ukuguga kwesikhumba.
I-Resveratrol ingasebenza futhi njenge-ejenti ekhanyisa isikhumba evimbela umsebenzi we-tyrosinase. Iphinde ilwe nokuguga kwezithombe ngokuvimbela ukwakheka kwe-melanin. Kwenza isikhumba sibe mhlophe futhi singabi nabala. Kuqinisekisiwe kumamodeli ezilwane ukuthi ukusetshenziswa kwe-topical ye-resveratrol kuvimbela ukukhiqizwa kwe-melanin, futhi kunciphisa umbala wesikhumba ngemva kokushiswa kwemisebe ye-UV.
Ucwaningo lwango-2002 lwabonisa ukuthi i-resveratrol ivimbela ukukhula kwamagciwane kanye nesikhunta esidala izifo zesikhumba, njenge-Staphylococcus aureus, i-lactococcus, ne-Trichophyton. Ngaphezu kwalokho, i-resveratrol inganciphisa amandla amaseli esikhumba ukukhiqiza i-hydrogen peroxide. Njengoba izinga lokuvuvukala liyancipha, umonakalo okhulayo kumaseli nawo uyancipha. Ngisho nezinduna zingadanjiswa kusetshenziswa i-resveratrol, ngoba inempahla elwa namagciwane elawula ukukhula kwamangqamuzana endlala ye-sebaceous.
I-Resveratrol ngokwayo izwela ukukhanya kwe-UV. Kunconywa ukuthi kusetshenziswe namanye ama-sunscreens, noma asetshenziswe ebusuku ukuze kugcinwe ukusebenza kwawo. Ukhilimu wasebusuku oqukethe u-1% we-resveratrol, u-1% wevithamini E kanye no-0.5% we-baicalin ungakhuphula ukuhlanganiswa kwe-collagen namanye amaprotheni. Futhi ukwakheka kunciphisa imigqa emihle nemibimbi, kwandisa ukunwebeka kwesikhumba kanye nokuqina kwesikhumba.
Ihlanganiswe ne-green tea extract, i-resveratrol inganciphisa ububomvu bobuso cishe emavikini angu-6.
I-Resveratrol inomphumela we-synergistic nge-vitamin C, i-vitamin E ne-retinoic acid.
I-Resveratrol inganciphisa ukucasuka kwesikhumba okubangelwa i-alpha hydroxy acid uma isetshenziswa ihlangene ne-alpha hydroxy acid.
Ukuxuba ne-butyl resorcinol (okuphuma ku-resorcinol) kunomphumela wokumhlophe we-synergistic futhi kunganciphisa kakhulu ukwakheka kwe-melanin.
I-Resveratrol nesihlungi se-UV nakho kungahlanganiswa kube ukwakheka kwezimonyo. Ukwakhiwa kunezinzuzo ezilandelayo: i-1) ivimbela ukubola kwe-resveratrol eyenziwe yi-UV; I-2) ithuthukisa ukungena kwesikhumba, futhi ithuthukise ukutholakala kwe-bioavailability yezithako ezisebenzayo ezisebenzayo kuzimonyo; 3) igwema ukuvuselelwa kabusha kwe-resveratrol futhi 4) ithuthukisa ukuzinza kokwakheka kwezimonyo
Okwedlule: I-Ascorbyl Palmitate
Olandelayo: I-Ethyl Ascorbic Acid